दु:खद खबर ! माछालाई चारो दिने क्रममा एकै परिवारका तीनजनाको मृ’त्यु, गाउँ नै शो’कमा ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/दु:खद खबर ! माछालाई चारो दिने क्रममा एकै परिवारका तीनजनाको मृ’त्यु, गाउँ नै शो’कमा !
बेलुका माछालाई चारो दिएर छोरीहरु नुहाउने क्रममा मोरङको ग्रामथान ४ मोतिपुरमा पोखरीमा डुबेर एकैपरिवारका ३ सदस्यको मृ’त्यु भएको छ। ग्रामथान गाँउपालिकाका अध्यक्ष शिव नारायण माझीका अनुसार आइतबार पोखरीको माछा रुग्न बसेका २ छोरी र आमाको पानीमा डु’बेर मृ’त्यु भएको हो। ग्रामथान गाँउपालिका र कटहरी गाँउपालिकाको सीमामा पर्ने बाबा बनस्खण्डी मन्दिर परिसरमा रहेको पोखरीमा घ’टना भएको मोतिपुरका वडाध्यक्ष बैजनाथ विश्वासले जानकारी दिए।
वडाध्यक्ष विश्वासका अनुसार घ’टनामा करिब ३५ वर्षीया सीता अधिकारी, छोरीहरु १३ वर्षीया पवित्रा अधिकारी र ९ वर्षीया कृतिका अधिकारीको मृ’त्यु भएको हो। बेलुका माछालाई चारो दिएर छोरीहरु नुहाउने क्रममा घ’टना भएको गाँउपालिका अध्यक्ष माझीले जानकारी दिए। दुवै छोरी नुहाउने क्रममा डु’बेपछि अ’त्तालिएर आमा समेत छोरी बचाउने क्रममा पोखरीमा डु’बेको उनले बताए ।
स्थानीय रुद्र कट्वालको सो पोखरीमा अधिकारी परिवार माछा रुग्ने काम गर्दै आएका थिए। उनीहरुको श’व बेलुका नै स्थानीय र प्रहरीको पहलमा पोखरीबाट निकालिएको थियो ।गाँउपालिकाको पकिया गाँउमा बसोबास गर्दै आएको अधिकारी परिवार घ’टना पूर्व माछालाई चारो दिन पोखरी पुगेको बताइएको छ। गाँउपालिका अध्यक्ष माझीका अनुसार मृ’तकको श’व पोष्ट’मार्टमका लागि विराटनगरस्थित कोशी अस्पतालमा राखिएको छ।